အားလပ်ရက်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ ၂၀ | Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 12, 2021 Douglas Karr
အဆိုပါရှေးရှေးမှာ လှိုင် တစ် ဦး စီမံကိန်းနေကြသည် အွန်လိုင်းအားလပ်ရက်ရောင်းအား၏ 20% တိုး အသေးစားနှင့်အလတ်စားအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ယခုရာသီအတွက်!
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲဒီအစဉ်အဆက် - အရေးကြီးဆုံးအားလပ်ရက်ရာသီမှဘယ်လိုအကောင်းဆုံးရနိုင်သလဲ ခိုင်မာသောအစီအစဉ်ဖြင့်ဂိမ်းထဲ ဝင်၍ ရောင်း၊ ရောင်း၊ ရောင်းပါ။ ကျနော်တို့အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအတွက်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးကာလကိုရောက်တော့မယ်။ လှိုင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
Gift Card များကို - သင်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်လက်ဆောင်ကတ်ပြားနှင့်လက်ဆောင်လက်မှတ်များကိုထင်ရှားစွာပြပြီး၎င်းတို့အတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုလုပ်ပါ - စျေးဝယ်သူ ၂/၃ ကျော်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလက်ဆောင်ကတ်များကိုပေးခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ဆောင်ကတ်ပြားများသို့မဟုတ်လက်မှတ်များကိုပေးပို့သည့်အခါထုပ်ပိုးပြီးလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ပေးသောအလှဆင်ထားသောသေတ္တာတစ်ခုကိုထည့်ပါ။ ဒီအတွက်အပိုကောက်ခံရန်မကြောက်ပါနှင့်။
တစ်ညအိပ်ဆောင် - ၀ ယ်ယူသူများကိုနေ့ချင်းညချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ယူသူများကိုအလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမိနစ်စျေးဝယ်သူများအတွက်ဖြည့်တင်းပါ။ သုံးစွဲသူများအားသင်၏ပင်မစာမျက်နှာရှိနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကိုသူတို့မှာယူနိုင်ပြီးအားလပ်ရက်ကြီးများအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိနိုင်မည်ကိုပြောပါ။ အသစ်သို့မဟုတ်လျှော့စျေးနှုန်းထားများရှိမရှိသိရန်သင်၏ရေကြောင်းပံ့ပိုးပေးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ သို့ဆိုလျှင်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ (ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်သည်တရားဝင်လွတ်လပ်သောသဘောင်္တင်နေ့ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ အလေးအနက်ထားပါ။ အားလပ်ရက်များနှင့်နီးကပ်စွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်ယနေ့ခေတ်တွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းရန်စဉ်းစားပါ။ သင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုရောင်းပါက၊ သင်၏ဆိုက်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းပို့ဆောင်ခကိုထည့်သွင်းပါ။
အထူးထိတွေ့မှု - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်အော်ဒါမှာထားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းခြင်းပြုလုပ်ပြီးပါကနွေးထွေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးသင့်ကျေးဇူးတင်သည့်စာမျက်နှာတွင်မည်သည့်ရောင်းအားတက်ဖွယ်အခွင့်အလမ်းကိုမဆိုအားပေးပါ။ သင့်၏ဖောက်သည်များကိုပေးပို့သည့်အခါပို့ဆောင်ရေးသေတ္တာထဲ၌ကဒ်တစ်ခုထည့်ပါ။ သင့်တွင်အချိန်ရှိပါကလက်ဖြင့်ရေးထားသောမှတ်စုကိုလျှော့စျေးအတွင်း၌ထည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားနွေးထွေး။ မရေရာသည့်ခံစားချက်ပေးပြီး၎င်းတို့အားထပ်မံလာရန်အားပေးလိမ့်မည်။
In-store ကိုပစ်ကပ် - အကယ်၍ သင့်တွင်လက်လီရောင်းဝယ်မှုတည်နေရာရှိပါကစတိုးဆိုင်ကြိုတင်ရွေးစရာကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်ကိုငွေထပ်မံပေးဆောင်ခြင်းမှသက်သာစေသည်။
အခမဲ့ပြန်ပို့ခြင်း - ပြန်လည်ပေးပို့ထားသောပစ္စည်းများအတွက်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဤသည်ကို Zappos ၏ playbook မှခိုးယူသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုသင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းမပြုမီသင်ကြားပေးသည် အခုတော့ Buy ခလုတ်။ အားလပ်ရက်များပြီးဆုံးသည်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်အားလပ်ရက်ရာသီအတွင်းပြန်အမ်းငွေကိုတိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားပါ။
အရေးတကြီးဖန်တီးပါ - အရေးကြီးသောအားလပ်ရက်များအထိမည်မျှကျန်ကြွင်းသည်ကိုဖော်ပြသည့်သင်၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများနှင့်ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြန်လည်ရေတွက်ပါ။ သင်၏ PPC ကြော်ငြာစာသားထဲတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ရက်ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း (ရက်စွဲထည့်သွင်းခြင်း)!
အလှဆင် - အားလပ်ရက်ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးအချို့ကိုသင်၏လိုဂိုထဲသို့ထည့်ပါ (သို့) သင့်ပရိသတ်များနှင့်နောက်လိုက်များအားသင့်ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်တံဆိပ်အားလပ်ရက်ပုံစံဒီဇိုင်းများတင်သွင်းရန်တောင်းဆိုသည့်လူမှုမီဒီယာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။ အတွေးအမြင်အချို့တွင်စာလုံးတစ်လုံးပေါ်၌သန့်ရှင်းသောအကိုင်းတစ်ခုချိတ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ခရစ္စမတ်အလင်းများသို့မဟုတ်စန်တာ ဦး ထုပ်တစ်ခုထည့်ရန်သင်၏လိုဂိုကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဂူဂဲလ်သည်အဖြစ်အပျက်အမျိုးမျိုးအတွက်၎င်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးသင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပျော်စရာကောင်းသော၊ ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုကိုထည့်သွင်းပေးသည်။ သင်၏အားလပ်ရက်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများကိုသင်၏ site မှဖယ်ရှားပြီးနောက်နှစ်အတွက်သင်၏ပုံများနှင့်ကုဒ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ရက်စွဲတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ဟာသူတို့ရဲ့မီးတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်ချင်တယ်။
ဖော်ပြချက်စိတ်ကြိုက် - သင်၏ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များ၏ပါ ၀ င်မှုကိုဂျက်ဆင်ပါ။ ဥပမာ, မည်သူမဆို၊ နှစ်သက်ဖွယ်ရာခက်ခဲသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များစာရင်းထက်အများကြီးပိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ပေးမယ်သတ်မှတ်ပေးသည် - သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏အစုအဝေးများသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တောင်းများပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့အတွက်သီးခြားအမျိုးအစားတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ဤအစုအဝေးများကိုသင်ရှိပြီးသားအခြားအမျိုးအစားများတွင်လည်းနေရာချနိုင်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်အကြောင်းပြောဆိုပါ။
personalization - ၀ ယ်ယူသူများအနေဖြင့်မှာယူသူမှထူးခြားသောလက်ဆောင်မှတ်စုများကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းကို၎င်းတို့ကို order note များ၌နေရာချရန်သို့မဟုတ်အပိုထိတွေ့မှုအတွက်သင်၏ checkout စာမျက်နှာတွင်စိတ်ကြိုက်ကွက်လပ်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောထွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပန်းထိုးခြင်းကဲ့သို့သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းမှုများကမ်းလှမ်းပါ။
နောက်ကျော Give - မတ်လ Dimes ကဲ့သို့သောအချို့သောရောင်းရငွေအချို့ကိုဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့လှူဒါန်းသည့်လှုပ်ရှားမှုကိုကြိုးစားပါ။ လူတိုင်းကပြန်ပေးဆပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ဖောက်သည်တွေလွယ်အောင်လုပ်ပေးတာ။
အားလပ်ရက် Upsells - စျေးဝယ်သူများသည်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းအပြင်အပိုလက်ဆောင်ကဒ်တစ်ခုရသည့်မြှင့်တင်ရေးကိုကမ်းလှမ်းရန်စဉ်းစားပါ။ ဥပမာဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ဒေါ်လာ ၅၀ သုံးစွဲပါကသူတို့က ၅ ဒေါ်လာလက်ဆောင်ကဒ်ကိုရကြမည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဒေါ်လာ ၁၀၀၊ ၁၀ ဒေါ်လာလက်ဆောင်ကဒ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်ကို ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လက်ဆောင်ထုပ် - စျေး ၀ ယ်သူများကိုဈေးဝယ်သူများအားကူညီရန်အခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့စျေးစျေးလက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ပြီးတော့စာရွက်နဲ့စက္ကူပေါ်တက်အောင်လုပ်ပါ။
အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေး - Black သောကြာနေ့ (ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ရက်) နှင့် Cyber ​​Monday (ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးနောက်ပထမတနင်္လာနေ့) အတွက်အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေးများပေးကမ်းပါ။ ဤရွေ့ကားနှစ် ဦး စလုံးအွန်လိုင်းရောင်းအားများအတွက်ကြီးမားသောနေ့ရက်ကာလဖြစ်ကြသည်။
Gamify လုပ်ပါ - သင်၏စာမျက်နှာတစ်ခုထဲ၌သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့သောသေးငယ်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးရှာတွေ့သည့်သုံးစွဲသူများကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါ။ ၎င်းသည်လူများအားသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်လျှောက်လုံးသွားလာရန်နှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များများနှင့်ပိုမိုသိရှိရန်အားပေးလိမ့်မည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်သည့်အထူးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတစ်ခုဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုလုံးသို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ လက်ဆောင်များကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏ site ကိုလည်ပတ်ရန်သူတို့ကိုသတိပေးလိမ့်မည်။ သင်၏စွန့်ပစ်ထားသည့်လှည်းစာရင်းကိုအပတ်တိုင်းဆွဲထုတ်ပြီးထိုဝယ်ယူသူများအားပြန်လည်ဝယ်ယူရန်သတိပေးချက်ပေးပို့ပါ။ သင့်တွင်ရှိသည့်အဆက်အသွယ်များတိုးပွားစေရန်သင်၏သတင်းလွှာကို signup လုပ်ပါ။ သတိရပါ, ထပ်ခါတလဲလဲဖောက်သည်အသစ်များဝယ်ယူထက်စီမံခန့်ခွဲဖို့အများကြီးစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း။ ဖောက်သည်များကပထမဆုံး ၀ ယ်ယူပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုသင်၏လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်“ ဖောက်သည်အသစ်” လျှော့စျေးပါသည့်အထူးသတင်းလွှာတစ်ခုပို့ပါ။ ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်စောလွန်းပါသေးသည်။
တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု - မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်းနှင့်ဖုန်းဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာသုံးခြင်းဖြင့်သင်၏ထောက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ပါ။ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏စရိုက်ကိုဖောက်သည်ထိတွေ့တိုင်းတွင်တိုးချဲ့ပါ။ သင့်တွင် call center ရှိပါကဖုန်းပြောခြင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြင့်ဖြေဆိုရန်သို့မဟုတ်သင်၏ chat chat module တွင်အမှတ်တံဆိပ်ပါသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုထည့်ပါ။ စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိသောဖောက်သည်များပင်ကောင်းမွန်သောဆန္ဒကိုမကျရောက်စေနိုင်ပါ။ သင်မရှိသေးပါကသင်၏ဖုန်းအော်ပရေတာစနစ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ အချို့သောသူများကမေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပြီးနောက်အမှာစာနှင့်ခေါ်ဆိုခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
အခကြေးငွေကြော်ငြာ - အားလပ်ရက်များအတွင်းအားလပ်ရက်နှင့်ပတ်သက်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုထည့်သွင်းရန်သင်၏ PPC စည်းရုံးမှုများကိုချိန်ညှိပါ လက်ဆောင်များ or လက်ဆောင်။ သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ PPC လေလံများကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်ပြီးပြည့်စုံသောကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေရန်အနည်းငယ်ပိုသုံးရန်ရှာဖွေနေကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင် PPC ၌သင်၏နေ့စဉ်နိမ့်ဆုံးကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အနည်းငယ်ပိုသုံးရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်။ စျေး ၀ ယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာရေးထားခြင်း၊ ဗျူဟာမြောက်ကြော်ငြာစာသားသည်ပြိုင်ဘက်များထံမှရောင်းချခြင်းကိုခိုးယူနိုင်သည်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်လက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေနေသောစျေးဝယ်သူများအားသင်၏ PPC ကြော်ငြာစာသားနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုဖြည့်တင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “ လက်ဆောင်များအတွက်ဖေဖေအတွက်လက်ဆောင်များ” လိုသော့ချက်စာလုံးကိုကြော်ငြာမိတ္တူပါသော“ နာရီများ၊ ဂေါက်သီးလက်အိတ်များနှင့်လည်စည်းအစရှိသောအမျိုးသားများအတွက်အားလပ်ရက်လက်ဆောင်များရှိသည်” စသည့်အကြံပြုချက်များပါ ၀ င်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် - ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်အမျိုးအစားအသစ်များဖြင့်သင်၏ကွန်ရက်မြေပုံကိုစောစောစီးစီးတင်ပို့ပါ။ ထို့ကြောင့်ရောင်းအားမကုန်ဆုံးမီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်၎င်းတို့ကိုအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အမျိုးအစားနှင့်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သော meta ဖော်ပြချက်များကိုခိုင်မာအောင်နှင့်ချိန်ညှိပါ။ သင့်အမျိုးအစားနှင့်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများ၏စာမျက်နှာရာထူးအတွက်သင့်တော်သောသော့ချက်စာလုံးများပါဝင်သည်။ စျေး ၀ ယ်သူများကိုသင်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်းပြသရန်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာခေါင်းစီးနှင့် / သို့မဟုတ်ကော်ပီကိုညှိပါ။ ယခင်အဆင့်များနှင့်ဆင်တူသောသော့ချက်စာလုံးများထည့်သွင်းရန်သေချာခြင်းကြောင့်သင်သည်သင်၏လက်ရှိအဆင့်များတွင်နေရာမကျပါစေနှင့်။
Social Media ကိုအသုံးပြုပါ - တွစ်တာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ရန်သင်၏ Twitter နှင့် Facebook ကဲ့သို့သင်၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများကိုပြန်လည်ပုံစံချပါ။ လူမှုရေးမီဒီယာများမှတဆင့်သင်၏အထူးလျှော့စျေးနှင့်အထူးထုတ်ကုန်များကိုနေ့စဉ်ဝေမျှပါ - ၎င်းသည်အရေးတကြီးသဘောထားနှင့်သင်၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ကူညီသည်။ ၀ ယ်ယူသူများအားသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအဘယ်ကြောင့်နှစ်သက်ရကြောင်းကိုဗီဒီယို၊ ဖြေဆိုသူများကိုသူတို့ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်အပေါ်အထူးလျှော့စျေးပေးပါ၊ ထို့နောက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သူတို့ကိုးကားချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသုံးပါ။ မှတ်ချက်များ, ကြီးမားတဲ့များမှာ! သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများတွင်“ သင်၌တစ်ခုခုရှိလျှင် (သင်၏စတိုးဆိုင်နာမည်ကိုထည့်ပါ)” ဆိုသည့်စစ်တမ်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ထို့နောက်ဖြေဆိုသူများကိုသူတို့ဖော်ပြခဲ့သည့်ထုတ်ကုန်အပေါ်လျှော့စျေးကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆက်တွဲ!
Volusion ၏စာရင်းတစ်ခုလုံးကို download လုပ်ပါ အားလပ်ရက်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအချက်အလက်များ ၁၀၁!
မှတ်စု: ဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံး Volusion အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုပါဝင်သည်။ Volusion သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦး ဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းတွင်အောင်မြင်ရန် Volusion ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးပျမ်းမျှကုန်သည်များသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်။
Tags: အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးအီးမေးလ်အီလက်ထရွန်နစ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေး gamificationအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးလက်ဆောင်ကတ်များအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးတိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးရောင်းအားအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဆိုရှယ်မီဒီယာအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများလက်ဆောင် personalizationအားလပ်ရက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများအားလပ်ရက်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေး upsellsအားလပ်ရက်မဟာဗျူဟာများကဗျာ
4:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 02